Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 23/10/2020)
Yebo, ukudla isitimela ingaba yisimanga kodwa ngisho okungcono isitimela ukudla iqhathaniswa Noma eCopenhagen! iyona beacon ukudla Nordic, futhi kufanele senze konke okusemandleni akho ukuba uye kuhlole. Akagcini nje lena ingenye Kuhle Amadolobha zokudla e-Europe, eatery has been the No. 1 indawo phezu San Pellegrino uhlu iminyaka! Yebo, amanani ziphezulu, kodwa ukunambitheka uthola kuwufanele. Uma ufuna pop phezu ukuze eScandinavia ngesitimela, Copenhagen kuyinto enkulu lomasango stop sokwenza lokho.
Thina uphawu our list of Best Cities for Foodies with Trieste, Italy
Trieste ingeyamakhosi Empire Austro-Hungarian kwaze kwagqashuka iMpi Yezwe I. Leli qiniso khona lapha unezela ekubalulekeni izitsha Trieste sika okumnandi. Kungani? Ngenxa yomlando Trieste sobunxele nomthelela omkhulu ku-cuisine yayo. Atypical of izitsha evamile Italian, Trieste prides ku ezinjalo combos uyinqaba pasta futhi pizza eceleni neklabishi namasoseji lisikiwe, futhi ngendlela efanayo. Jabulela ukudla langa, ushokoledi alube, futhi ikhofi fabulous emzini lapho uJakobe uJoyce waqala ukubhala Ulysses. Ukubuka emangalisa yonkana Adriatic ngeke ubuhlungu ukudla, noma. Ukuhlobana phakathi Italy kanye Slovenia uphelele ngesitimela, ukuze ukwazi ukunikeza Slovenia ithuba ngenkathi komakhelwane.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-foodies-europe%2F - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#traveleurope Ukudla Ukudla foodies Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi